<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">No. Bathrooms/Heads: 3</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Fuel Tanks Capacity: 320 lit</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Water Tanks Capacity: 790 lit</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Engines: Volvo Penta D2-75, 53 kW / 72 hp</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Equipment:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"><br /> Electronics:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Depthsounder</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Log-Speedometer</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Wind Speed and Direction</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">TV Set</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">DVD Player</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Autopilot</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Radio</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Compass</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">CD Player</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">GPS Chart Plotter</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Cockpit Speakers</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">VHF</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Sails:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Furling Mainsail</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Furling Genoa</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Rigging:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Steering Wheel</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Inside Equipment:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Bow Thruster</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Electric Bilge Pump</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Oven</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Manual Bilge Pump</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Marine Head</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Heating</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Hot Water</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Refrigerator</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Battery Charger</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Electrical Equipment:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Shore Power Inlet</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Outside Equipment/Extras:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Teak Cockpit</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Cockpit Shower</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Gangway</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Radar Reflector</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Tender</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Liferaft</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Cockpit Table</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Swimming Ladder</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Covers:</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Bimini Top</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">Spray Hood</p>
<p style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;">The boat is registered under the Croatian flag. EU VAT NOT PAID.</p>
&#10;<li>2 steering pedestals
&#10;<li>2 Steering wheels with leather cover
&#10;<li>Pedestal for instruments in the cockpittable
£ 86,922Category:SailboatSubcategory:CruiserSales status:availableManufacturer:BavariaModel:50 CruiserYear built:2007Length (m):15.40Beam (m):4.49LOA:15.39Condition:UsedSale:TradeEngine manufacturer:volvo pentaKW:72.0 hpFuel Capacity:84.54 gallonFresh water capacity:208.72 gallonNo. of cabins:5No. of berths:10WC & bathrooms:3SpecificationsWaterline length44.17 feetModeld2-75 53 kw/ 72 hpModel Year2015 ALMISSANI d.o.o.business page > Edward William the stress free way to insurance